Tengzhou Delifu Casting Materials Co., Ltd., sampana iray an'ny FENG ERDA GROUP. Niorina tamin'ny taona 2009, ny mpiasa dia manana mpiasa 320 miaraka amin'ny sanda famoahana 660 tapitrisa yuan isan-taona. Misy enina famokarana mandeha ho azy, ny vokatra lehibe dia: (chromium series GB3683-2008) ferrochromium avo lenta, ferrochromium ambany-karbona, ferrochromium micro-carbon, (andiana manganese GB3795-2006) ferromanganese avo lenta, ferromanganese karbaona afovoany , ferromanganese ambany karbaona, (rafitra inokola) inoculant ferrosilicon, inoculant silicon-barium, inoculant Silicon-Barium-calcium, (rafitra carbonizer), additive carbon-based coke sns.
Vita hatramin'ny habeny
Tsipika famokarana Ferroalloy
Rehefa afaka folo taona mahery ny fampandrosoana dia nanjary mpamatsy vy be dia be ny indostria vy. Indrindra amin'ny fanamboarana ravina vy tsy misy fangarony sy faritra vy tsy misy fangarony, ny Alloy Dep. "chromium avo, chromium ambany, chromium micro" dia mampiseho ny tombony sy ny mampiavaka azy tsy manam-paharoa - ny kalitao milamina, ny firafitra matevina, ny tahan'ny fitrohana avo. Ao amin'ny indostria hametrahana sary tsara, mahazo laza tsara.
Noho ny fameperana ny vidiny dia miorina ao amin'ny "Shizuishan City, Ningxia" sy "Baotou City, Mongolia anatiny" ireo orinasa mpamokatra. Amin'ny alàlan'ny fanakambanana sy ny fahazoana ary ny fitambarana, ny DELIFU CASTING dia nanjary orinasa mpamokatra manana ny kalitao tena tsara, fiarovana ny tontolo iainana, refy lehibe ary kalitao avo lenta ". Miaraka amin'ny fanampian'ny lampihazo sy ny tanjaky ny orinasa, ny 85% chromium sy ny akora manganese dia nohafarana avy amin'ny orinasa mpitrandraka vahiny fanta-daza mba hiantohana ny fitoniana ny kalitaon'ny vokatra sy ny famatsiana akora.